FBC - Mootummaan Naannoo Oromiyaa godina Goondar kaabaatti balaa badiinsaa qaqqabeen gadda itti dhag’ame ibse
Mootummaan Naannoo Oromiyaa godina Goondar kaabaatti balaa badiinsaa qaqqabeen gadda itti dhag’ame ibse
Finfinnee, Adoolessa 11,2008(FBC) - Mootummaan Shaabiyaa gareewwan badii Asmaraatti lenjisee erguun tibbana godina Goondar kaabaatti balaa badiinsa lubbuu fi miidhama qaamaa namoota nagaa fi miseensoota humna tasgabbiirra ga’een Mootummaan Naannoo Oromiyaa gadda cimaa itti dhag’ame ibseera.
Mootummaan naannichaa ibsa har’a baaseen ergamni shoroorkaa Shaabiyaa fi ergamtootasaa humna gamtaawaa ummattootaatiin ni fashalaa’a jedheera.
Sochii tibbanaatiinis Ummata waggoota hedduuf waliin jiraatan walficcisiisuuf carraaqqiin taasise ummattoota fageessanii yaadaniin dhaabameera jedhe.
Biyyattiitti sirni abbaa irree erga barbdaa’ee asitti sirni federaalawaa saboonni sablammoonniifi ummattoonni mirga walqixa ittiin keessumeeffaman, mirgi ittiin ofiin ofbulhaniifi dhimma biyyaa irratti mirga walqixa ittiin murteessan ijaaruun akka danda’ame ibsi kun mul’iseera.
Kallattii ijaarsa sirna Demookratawaa Mootummaan misoomawaan diriirseen Nagaa amansiisaa itti fufsiisuufi ummattoonni mootummaa wajjin hiriiruun biyyattii yaaddoo bibittinnaa’uu keessaa baasuun gara jijjiirama fakeenya ta’e galmessisuutti erga ce’amee waggoonni kurnan lama caalan lakkaa’amuus eeree jira.
Garuu jijjiirama galmeeffame kanatti kan inaafe mootummaan Shaabiyaa Nagaa biyyattii boressuufi imala haaromsaa eegalame gufachiisuuf carraaqqiin inni hin taasifne akka hin jirre ibsichi mul’iseera.
Duulwwan badii Shaabiyaan qindeessu tumsa ummattootaafi humna tasgabbii keenyaan qolatamaa kan ture ta’us gareen shoroorkaa kun har’as akkuma bare gocha shoroorkaa raawwatu irraa of qusachuu hin dandeenye jedheera.
Tibbana Asmaraatti miseensoota garee badii leenjisee bobbaaseen Goondar kaabaatti Namoota Nagaafi miseensoota humna tasgabbii irratti miidhaa qaamaa geessiisuufi lubbuu balleessuun isaas kanuma kan mul’isu akka ta’edha ibsa kanaan kan eerame.
Mootummaan Naannoo Oromiyaa goccha shoroorkaa kana balaaleeffachuun, gocha shoroorkaa raawwatameen miseensoota poolisii Naannoo Amaaraafi federaalaa akkasums lammiiwwan Nagaa lubbuun isaanii darbeen gadda itti dhaga’ame ibsuudhaan maatiifi darboota isaaniitiif jajjabina hawwa jedheera.
Oduuwwan Biroo « Hanni qormaata biyyaalessaa gantummaa fi egeree dhalootaarratti yakka aggaameme - mootummaan naannoo Oromiyaa	Ibsa haala yeroo irratti ejjannoo mootummaa naannoo Oromiyaa balballoomsu »